28 Julayi - 10 Agasti 2017 (isiZulu)
28 Julayi - 10 Agasti 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za
Izindaba: Ikhasi 8-9 Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 10
YENZA OKUHLE NSUKU ZONKE UKUHANJISWA KWEZIDINGO ZOMPHAKATHI ISIZINDA SEZOKU- VAKASHA
UNgqongqoshe woMnyango wezokuBusa neZindaba zoMdabu uNomusa Dube-Ncube kanye neMeya yeTheku uZandile Gumede behlanza ngaphandle komuzi eCato Manor njengenxenye yomkhankaso wosuku luka Nelson Mandela. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE SOHANA SINGH INDAWO yaseSiphingo isale ihlanzekile futhi iluhlaza cwe emva kokuthi uMasipala weTheku uthathe isinyathelo sokuyokhuculula le ndawo kusukela mhlaka 24 kuya kumhlaka 28 Julayi. Ithimba ebelibandakanya iminyango kaMasipala eyahlukene lihlangabezane nezinkinga eziningi ngesikhathi kuqhubeka lomkhankaso wokuhlanza, ezifana nokulahlwa kukadoti ngokungemthetho, ukusebenza kwamabhizinisi angekho emthethweni kanye nomhlaba ongenalutho. Leli thimba liphinde laqinisekisa ukulandelwa kwemigomo yokuhlela izakhiwo. Ithimba liphinde lalungisa imisele yamanzi kanye nemigwaqo. Lo mkhankaso, ohlose ukubhekana nezingqinamba zokuhanjiswa kwezidingo emphakathi kanye nezinto eziphazamisa osomabhizinisi kanye nabahlali wenziwe emva kokuthi iPhini leMeya uFawzia Peer osanda kuvakashela kule ndawo njengengxenye yokuyoxoxa ngokuhanjiswa kwezidingo zomphakathi. UKhansela uPeer ujube abasebenzi bakaMasipala ukuthi bazixazulule zonke izinkinga eziphakanyisiwe bese bemnikeza umbiko. INhloko yoPhiko lezokuThuthukiswa koMnotho uMusa Mbhele uthe iDolobha lihlose ukubhekana nezinkinga kanye nezingqinamba zale ndawo futhi lithathe isinyathelo sokuphuthumisa ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi kule ndawo. ?Lokhu kuzoqhubeka isikhathi eside futhi sifisa ukubona umehluko omkhulu ezinyangeni ezizayo. Sinxusa abahlali ukuthi babike izinto ezingekho emthethweni futhi beqinisekiseni ukuthi le ndawo ihlala ihlanzekile.? UMbhele uthe njengeDolobha elincane, Isiphingo siyisizinda sokukhulisa umnotho weTheku. UMasipala uzimisele ukuguqula indawo yaseSiphingo ukuze isebenze kahle futhi kuphele ubugebengu kanye nokungcola kuyo. UMasipala unxusa amalungu omphakathi ukuthi ziyisukumele indawo yabo. sohana.singh@durban.gov.za UMnyango wezokuLungiswa kwemiGwaqo kuMasipala ubuyingxenye yethimba ebeliyokhuculula indawo yaseSiphingo kusukela mhlaka 24 kuya kumhlaka 28 Julayi. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE
Luyaqhubeka olokulungisa iSiphingo
CHARMEL PAYET IMBIZO yeMeya nabahlala emahostela izobanjelwa eThekwini ngenhloso yokuhlinzeka abahlali basemaCommunity Residential Units (CRUs) ayishumi, aziwa ngamahostela, ngethuba lokuxoxisana nobuholi beDolobha. Le Mbizo izohlinzeka ngethuba lokuxoxa ngezingqinamba zasemaCRUs, idlulise ulwazi ngezinkinga eziphathelene nezempilo iphinde ihlinzeke ngezixazululo zokubhekana nezinkinga zomphakathi ezifana nokusetshenziswa kwezidakamizwa notshwala, izinga eliphezulu lendlala kanye nokuhanjiswa kwezidingo zomphakathi. Balinganiselwa ku 12 000 abantu okulindeleke ukuthi bahambele lo mcimbi. Imininingwane mayelana neMbizo yeMeya yethulwe emhlanganweni wesiGungu esiPhezulu mhlaka 25 Julayi. Imbizo izohlelwa ngokubambisana nabezenkolo kanye nezinye izinhlaka. Kulo mcimbi kulindeleke ukuthi kube nomkhuleko, abazonandisa ngokushaya indlamu kanye nemibukiso yeminyango kahulumeni enemiyalezo eyahlukene. Usuku kanye nendawo yomcimbi kuzoqinisekiswa maduze. IMeya yeTheku uZandile Gumede ithe onke amaHostela aseThekwini azohlangana kulo mcimbi ukuzoxoxa ngezinkinga ezibahluphayo. Ithe le Mbizo izoba yithuba lokuhlinzeka abahlali ngolwazi abaludingayo. ?Lokhu sikwenzela ukuphatha abantu abahlala emahostela ngenhlonipho. Sifuna ukudlulisa umlayezo, sibize bonke abantu ukuze sikhulume nabo. Usuku sisazolihlela ukuze sikwazi ukulalela izikhalazo zabantu abazobe bekhona,? kusho uGumede. IPhini leMeya uFawzia Peer uthe kubalulekile ukuthi iMeya uGumede ihlangane nabahlali ukuze baxoxe ngezingqinamba zemphakathi. ?Siyazi ukuthi kunezinkinga emaHostela, le Mbizo izokwakha ubumbano kubantu. IMeya izolalela izikhalazo zabahlali ukuze sikhombise ukuthi siyiDolobha elinakekelayo. Ngiyishayela ihlombe iMeya ngalesi senzo sayo esihle kangaka,? kusho uKhansela uPeer. USihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu kanye neNgqalasizinda uKhansela uMondli Mthembu uthe ubuholi beDolobha kumele bubhekane nezinkinga
Imbizo yabahlala emahostela
zasemahostela. ?Kuyaqala ukuthi ubuholi beDolobha buxoxisane nabantu abahlala emahostela. UMkhandlu uke waphasisa ukuthi kungenelelwe ezinkingeni zasemahostela phambilini. Ziningi izinto okumele sizenze ukuze sithuthukise isimo sasemahostela. Le Mbizo iyisiqalo sezinto esizozenza emahostela ukuze siqinisekise ukuthi ukungenelela kwethu angeke kudale izinxushunxushu,? kusho uKhansela uMthembu. charmel.payet@durban.gov.za
Siguqula Izimpilo Zabantu
Bhalisa ungakashayi u-14 Aug
Ngeminye imininingwane: 031 311 4500
29 Sept 01 Oct